I-Wholesale 2 ku-1 I-Aluminium Rooftop Folding J Bar Kayak Car Roof Rack ye-Canoe Surfboard SUP abakhiqizi nabaphakeli |Izesekeli zomholi
2 ku-1 I-Aluminium Rooftop Folding J Bar Kayak Car Roof Rack ye-Canoe Surfboard SUP
Ukuba ne-kayak rack ethembekile evela ku-Leader Accessories kungenza kube lula ukulayisha i-kayak noma isikebhe emotweni yakho, futhi kunezinhlobo eziningi ezahlukene zamaracks ophahla lwemoto ongakhetha kuzo, njengale rack engu-2 ku-1 ye-aluminium J bar egoqa i-kayak rack ene- ukwakhiwa kwe-heavy-duty, futhi kuhambisana nezintambo ezi-4 zamahhala ezingavikela i-kayak yakho noma i-SUP emotweni yakho.
Into NO.: 103726
Isikhathi esiholayo: IZINSUKU ezingama-35
Imoto yabagibeli, iSUV, iloli
I-Kayak, isikebhe, i-SUPukuthutha
Umthamo omkhulu wokuthwala:
- Indawo evelele yophahla lwe-kayak yesitayela sika-J idala izikhala ezisebenzayo zemoto yakho.
- Izingxenyekazi zekhompuyutha ezikwazi ukumelana nokugqwala ezinesici esisheshayo sokuvula/ukuvala ziqinisekisa ukufakwa nokususwa kalula nangokufanele.
- Igwebu eliwugqinsi eligxunyekwe ukuze kuvikelwe umkhiqizo we-kayak yakho ekunwayeni.
- Ama-alloys e-aluminium aqinile futhi anesisindo esincane.
- Isakhiwo esiqinile silingana nama-kayak amaningi.
- 1 isethi
- 4 amabhande
- Isethi yezinto ezifakwayo
- 1 imiyalelo yokuhlanganisa
● [ UKWAKHIWA KWESINDA ESINZIMA ] – Izinsiza Zokuhola i-kayak & namarack e-SUP esophahleni, ezenziwe ngobubanzi obungu-22 mm kanye neshubhu lensimbi elingu-1.5 mm, ahlala isikhathi eside kunanoma yini enye.Ngesici se-aluminiyamu engasindi, eqinile, futhi engagqwali, eyenziwe ngamangxube e-aluminum yezinga eliphezulu le-anodized aviation, eyenza ikwazi ukumelana namanzi futhi inqande ukubola isikhathi eside.
● [ IDIYANZO OKUFIKAYO KANYE NE-ERGONOMIC] – Idizayini ekhishwa ngokushesha e-ergonomic, kulula ukuyisebenzisa, yenza ukuthi igoqeke isicaba uma ingasetshenziswa, okwenza kungadingeki ukuthi kukhishwe ama-rack uma ungena egaraji.
● [ UKWENZAKALO WOBUFAKAZI BOKUKWETSHWA] – Igwebu eliwugqinsi eligoqelwe ukuvikela i-kayak yakho ukuthi ingaklwebheki, kanye nephinifa elivalwe ngerabha ukuvikela ibha enqamulayo ukuthi ingaklwebheki.
● [ UMQEQESHO OHLANGANISAYO WOKWENZA ] – Ihambisana nenqwaba yamabha anqamulayo, njengakumabha ayisikwele, asekuqaleni, kanye nama-aerodynamic, ngaphandle kwebha eyindilinga.
● [ UKUSETSHENZISWA OKUNINGI ] – Faka kalula futhi kalula, hamba namabhande angu-4 amahhala okubopha, alungele ukulayisha i-kayak, isikebhe, i-surfboard, kanye ne-SUP, okusho ukuthi kungaba indawo yokubeka i-kayak, indawo yokubeka izikebhe, ibhodi lokusefa. i-rack kanye ne-SUP rack ngesikhathi esifanayo.
Ifanele izikwele eziningi zasefekthri nangemuva kwemakethe, ama-oval, nama-crossbar ayisicaba.Sicela wenze isiqiniseko sokuthi usayizi wayo, uhlobo, kanye nokuma yikho kanye okudingayo.
Okwedlule: 500 LBS Umthamo 60”x24”x6” Ukugoqa I-Hitch Mount Cargo Carrier Enesitendi Esilingana 2” Isamukeli
Olandelayo: Ipheya engu-1 kanye namapheya angu-2 we-J Bar Rooftop Kayak Rack enezintambo ezibophezelayo zeBhodi Lesikebhe kanye ne-Surf
Izimoto eziphezulu ezingu-25 ezithengiswa kakhulu zango-2021 e-US